Hordhac: Chelsea Vs Southampton ee Premier League, Mason Mount oo dib u soo Laabanaya, Shaxda Macquulka | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Hordhac: Chelsea Vs Southampton ee Premier League, Mason Mount oo dib u...
Hordhac: Chelsea Vs Southampton ee Premier League, Mason Mount oo dib u soo Laabanaya, Shaxda Macquulka
Iyagoo raadinaya inay ka fogaadaan guuldarro seddexaad oo xiriir ah tartamada oo dhan, Chelsea ayaa Stamford Bridge ku soo dhaweyn doonta Southampton kulan ka tirsan Premier League.
Kulankii ugu dambeeyay ee Blues ayaa guuldarro 1-0 ah kala kulantay kooxda heysata horyaalka ee Manchester City, halka kooxda Ralph Hasenhuttl ay guuldarro kala kulantay Wolverhampton Wanderers.
Chelsea: N’Golo Kante ayaa ka maqan Chelsea ka dib markii laga helay COVID-19 bilowgii isbuuca.
Mason Mount ayaa ku soo laaban doona kooxda ciyaarta sabtida, Chelsea ayaana si weyn u tabtay isaga labadii kulan ee ugu dambeysay.
Thiago Silva waa in la nasiyaa marka la fiiriyo sida ay u kala weyn yihiin kulamada. Iyada oo Cesar Azpilicueta looga baahan yahay daafaca midig iyadoo Reece James uu maqan yahay, Trevoh Chalobah wuxuu haystaa fursad hufan oo uu kulankan ku soo bilowdo.
Ben Chilwell ayaa hubaal ah inuu safan doono kulankiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League xilli ciyaareedkan.
Southampton: Armando Broja lama filayo inuu ku soo bilowdo Sababo la xiriira shuruudaha heshiiska amaahda ah.
Southampton ayaa si toos ah ugala soo wareegtay Valentino Livramento kooxda Chelsea, si kastaba ha ahaatee, wuxuuna ku soo bilaaban doonaa kulankan.
Moussa Djenepo ayaa doonaya in lagu soo bilaabo kulankan waxaana laga yaabaa inuu kulankan ciyaaro, Nathan Redmond. Theo Walcott iyo Stuart Armstrong ayaa ku soo laabtay tababarka.
Chelsea wax guul ah ma gaarin seddexdii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay Southampton (2 barbaro iyo 1 guuldarro), markii ugu dambeysay oo ay guul ka gaarto waa intii u dhaxeysay October 1990 ilaa December 1993 (7 kulan).
Southampton ayaa 19 dhibcood ka heshay 22 kulan oo Premier League ah oo ay la ciyaartay Chelsea (W4 D7 L11) – kaliya Aston Villa (27) iyo Crystal Palace (21) ayaa Saints ka heshay dhibco ka badan tartanka banaanka.
Saddex ka mid ah afartii guuldarro ee Chelsea ee Premier League ka soo gaartay Thomas Tuchel ayaa yimid kulamada gurigooda.
Blues ayaan laga badinin kulamadii horyaalka oo xiriir ah Stamford Bridge tan iyo bishii December 2019, oo kulankeedii labaad ay la ciyaareen Southampton.
Saacada (15:00pm Somalia) (16:00pm Yurub)
Previous articleHordhac: Brighton Vs Arsenal ee Horyaalka Premier League-ga, Granit Xhaka oo Dhaawac ku maqan, Shaxda Kulanka
Next articleHordhac: Manchester United Vs Everton Kulankooda Premier league-ga, Aaron Wan-Bissaka iyo Xidigaha kale ee soo laabtay